मनसुन थप सक्रिय हुँदै,देशैभर तीन दिन यि स्थानमा भारि वर्षा हुने,सबैमा सर्तक रहन माैसम विभागकाे आग्रह! |
August 27, 2021 adminLeaveaComment on मनसुन थप सक्रिय हुँदै,देशैभर तीन दिन यि स्थानमा भारि वर्षा हुने,सबैमा सर्तक रहन माैसम विभागकाे आग्रह!
काठमाडौं। बिहीबारदेखि तीन दिनसम्म नेपालमा ठूलो पानी पर्ने सम्भवना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विभागले बिहीबारदेखि भदौ १२ गतेसम्म पूर्वदेखि पश्चिम नेपालको पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ। हाल मनसुनको न्युन चापीय रेखा नेपालको तराई भूभाग नजिक रहेकाले अबको ३ दिन भारी वर्षा हुने विभागको भनाइ छ ।विभागले प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान, सुदूरपश्चिम तथा कर्णालीका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षा हुने बताएको छ।
तपाई बाहिर या बाटोमा हिँड्दा भेटिने यस्ता सात वस्तुबाट सँधै जोगिनुहोस! हामी घरबाट कतै हिड्ने क्रममा कहिले काहिँ बाटाेमा भेटिने वस्तुहरुमध्ये केही शुभ हुन्छन् भने केही अशुभ पनि हुन्छन् । धर्मशास्त्रअनुसार हामीले यस्ता अपवित्र चिजहरुबाट बँचेर हिड्नु पर्छ।यदी बाटोमा हिँड्दा भूल बश यस्ता चिज छोएमा नुहाएर मात्रै अरु काम गर्नु पर्छ । यसको ख्याल नगरी त्यस्ता चिजहरु छुनाले धेरै प्रकारका दोषहरुले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् । यस्ता अपवित्र सात चिज छन्, जोबाट सँधै जोगिएर हिँड्नु पर्छ ।
१.ता-न्त्रिक विधिबाट मन्सा-इएका वस्तुहरु:-नराम्रो नजर उतार्नको लागि या नराम्रो शक्तिबाट छुटाउन तन्त्रमन्त्र गरिन्छ। यसमा धेरै चिजका उपयोग पनि गरिन्छ र अन्तिममा यी चिजहरुलाई सडकमा वा चौबाटोमा मन्साइन्छ । जस्तै खुर्सानी,कागती,अन्डा,फर्सी,सिंदूर आदि। यदी बाटोमा हिँड्दा यस्ता कुराहरु देखेमा यसबाट बचेर हिड्नुपर्छ।
२.फोहोर कपडा:-बाटोमा फोहोर कपडा देखेमा यसबाट पनि परै बस्नुपर्छ । यस्ता कपडा छोएमा हामीलाई अपवित्र बनाउन सक्छ । त्यसैले यस्ता कपडालाई छुन हुँदैन।३.कपाल:-बाटोमा हिँड्दा तपाईंले कपालको पोको देखेमा त्यसबाट टाढा रहनुहोस् । र बँचेर हिँड्नुहोस्। शास्त्रअनुसार शीरबाट झरेको कपाल पनि अपवित्र मानिन्छ।
भारतमा एक महिना लक डाउन लम्बियो, नेपालले के गर्ला? भारतको यस्तो निती आउने दिनमा
प्रचण्डको आँखा खुल्ने गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दिए यस्तो चेतावनी।